Accueil > Gazetin'ny nosy > Ministeran’ny vola : Mampitandrina ny sendika amin’ireo olona tsy izy
Ministeran’ny vola : Mampitandrina ny sendika amin’ireo olona tsy izy
Eo anatrehan’ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony hiasa ao amin’ny sampan-draharahan’ny ladoany sy ny hetra dia miakatra ny feo eo anivon’ny sendikan’ny mpiasan’ny ladoany sy ny hetra mba tsy ho olona tsy izy no hatolotra amin’izany.
Mandeha dia mandeha ny resaka fa izany Lainkana Zafivanona izany no hatao tale jeneralin’ny Ladoany. Ingahy Rakotoson Tsivo Nivotiana Fanilo no hatao tale jeneralin’ny hetra. Miasa Marius no talen’ny fisafoana ny hetra, ary ny tale ny orinasa vaventy ingahy Hery Florien Thierry.
Raha ny lohanom-baovao azo dia avy amin’ireo olona natolotrin’ny “diaspora” indray izy ireto. Ny diaspora izay voakiana hatrany fa miseho ho masy mandidy ao amin’ny fanjakana Andry Nirina Rajoelina izao. Miteny ny solontenan’ny mpiasa ao amin’ny ministeran’ny vola fa olon’ny HVM (Hery Vaovaon’i Madagasikara) izy ireo ary niray tamin’ny fitantanana tsy nety teo aloha. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia isan’ny antony nampiala ny minisitra teo aloha Gervais Rakotoarimanana ireo olona ireo.
Misy amin’izy ireo koa no misehoseho amin’ny maha taranak’izany Rainizanamanga izany ka tsy maintsy mifehy ny vola Malagasy hono.
Miteraka resabe eo anivon’ny mpiasan’ny hetra sy ny ladoany ity raharaha ity. Milaza fa hivory ny sendika amin’ny herinandro izao handinika ny raharaha ary hilaza ny heviny. Ny mpiasa sasany aza dia milaza fa angaha lany ny olona manampahaizana sy mahavoafehy ny asa amin’ny ministera no olona tsy izy no ho tendrena ao indray.
Eo amin’ny lafiny politika indray dia mazava ankehitriny fa tsy manana olona ny fanjakana Mapar sy TGV hatramin’izao. Efa olana lehibe feno ady lahy politika ny fanendrena izay ho depiote sy ho governora. Amin’izao fotoana izao indray dia sahirana mafy amin’ny fanendrena olona ambony amin’ny asam-panajakana ity fanjakana ity.
Raha mitohy izao dia ho maro ny grevy hiforona atsy ho atsy toa ny misy eny amin’ny oniversite eny Vontovorona izao. Maro ny lahatsoratra efa nampitaraina teto mba hohitan’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Mbola mitombo andro aman’alina nefa ny fitarainana ataon’ireo mpomba azy amin’ny fahitany ny zavatra tsy mety hitan’izy ireo. Raha raikitra ny fitakiana ataon’ny sendikan’ny ladoany sy ny hetra io dia ireo izany no fitakiana voalohany hataon’ny mpiasam-panjakana amin’izao fitondrana izao.